20 / 10 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Oktoobar 20, 2018
Gaariga korontada ku shaqeeya ayaa lagu soo bandhigay shirkii R&D iyo Innovation ee lagu qabtay Istanbul markii ugu horeysay. Awoodda matoorka 150 kw, xoogga faras u dhigma 203 horsepower to the gaariga 5 sano 6,5 milyan oo doolar [More ...]
Madaxweynaha Tuna oo ku dhawaaqay New Study Study Square
Duqa Magaalada Ankara Assoc. Dr. Mustafa Tuna, shaqada cusub ee dhismaha cusub ee Ulus Square ayaa la sheegay in la dhamaystiro. Madaxweyne Tuna ayaa ka jawaabay su’aalaha suxufiyiinta ee ku saabsan dhismaha New Nation Square. [More ...]
Metro waxaa la kordhin doonaa Garoonka Sabiha Gökçen ilaa Kurtköy
Sabiha Gökçen Airport-Kurtköy Jidka metro khadka 5,3 kiiloomitir kordhinta qorshaha wareejinta ayaa la ogolaaday. Beddelka, khadka metrooga waxaa lagu fidin doonaa xarunta wax lagu kala iibsado ee loo yaqaan Viaport. Golaha Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul, Sabiha Gokcen Airport-Kurtkoy [More ...]
Gawaadhida cusub ee wadada cusub ee Duble ee Uluyol Street
Duqa Magaalada Toçoğlu, oo baaray howlaha wadooyinka ee labada waddo ee hada socda Wadada Uluyol, ayaa yiri: ık Waxaan dhameystirney wejigii koowaad ee 4 ee mashruucayaga 2. Ganacsadeheenna iyo shacabkeennu waxay dalbanayeen isgoys cusub oo ku saabsan labada webi. Codsigan [More ...]
Dhibaatada Tareen ee Hindiya, 100 Dhimasho
Shilkaas oo ka dhacay India, 'Dussehra' oo ah dabaaldega si loo daawado dadkii faraha badnaa ee daawanayay. 100 ayaa lagu dhawaaqay inuu dhintay. Amarinder Singh, hogaamiyaha siyaasada ee gobolka Punjab, wuxuu sheegay inuu si dhakhso ah u awoodo. [More ...]
Gaadiidka Honorka ee Konya ayaa ku boorin doona ardayda
The Düewag tram, oo muddo sanado ah ka soo shaqeeyey Dawladda Hoose ee Magaalada Konya, waxaa loo keenay Jaamacadda Karabük si ay gacan uga geysato waxbarashada iyo tababarka, aqoonta iyo xirfadaha ardayda wax ka dhigta Waaxda Waxbarshada Nidaamka Tareenka. Agaasinka jaamacadda Karabük [More ...]
Khadka Tareenka Xawaare Sare ee Sivas Ankara Goorma ayuu dhacayaa?
Sivas Ankara 405 km YHT tareenka ayaa faafay wuxuuna 2019 bilaabi doonaa tijaabada wadida tijaabada waxaana si xamaasad leh u salaamay dadka Sivas. 2018 bilihii ugu dambeeyay ee maalmaha soo socda waxaan galnay mashruuca 2019 [More ...]
Khadka Gaadiidka ee Isbitaalka Magaalada ee Magaalada!
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Caalin Alinur Aktaş, oo la wadaagaya qorshihiisa Masterka Beşevler Ganacsato Yar yari ah, ayaa soo saaray qadka nidaamka tareenka ee laga soo qaado Emek si loo siiyo gaadiid ku haboon oo muwaadiniinta loo fidiyo Isbitaalka Magaalada 1355-sariirta. [More ...]
Burbur Baaxad leh oo Batman ah oo la xiro gaadiidka
Saldhigga Tareenka ee TCDD wuxuu duubay laamihiisa si uu marinnada jidadka TCDD uga dhigaan kuwo amaan ah. Saraakiisha Saldhigga Tareenka TCDD oo tilmaamaya in isgoysyada heerka burcad-badeednimada ee maraya wadooyinka TCDD ee ka gudbaya bartamaha magaalada Batman loo xiri doono gaadiidka: [More ...]
Khadka Metro ee Umraniye-Çekmekoy Oo Furan Doonaya
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevlüt Uysal ayaa yidhi, açıklama Ümraniye-Çekmeköy Metro Line, oo ah sii wadida khadka 'üsküdar-Ümraniye Metro Line', ayaa laga furi doonaa 15.30 saaka aroortii. Madaxweynaha [More ...]
Munaasabad Cusub oo loo Magacaabo Adana
Isaga oo difaacaya sheekada mashiinka metrooga Adana ayaa ku soo laabatay xubin ka tirsan golaha deegaanka AK Party ee Magaaladda Zafer Kara, oo ah xagga dambe ee magaalada dhabarka dambe ee tareenka dhulka hoostiisa ee Ankara oo sugaya in wajiga labaad ee mashruuca la hirgaliyo, ayuu yidhi. [More ...]
Gebze Isikgöl Street Cusbooneysiiyay
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dayactirkeeda iyo dayactirkeeda wadooyinka iyadoo dhulku gaba gaboobay. Wareegtadan dhexdeeda, kooxihii ku xirnaa Waaxda Gaadiidka ee ka shaqeeya degmada Gebze ayaa dib loo cusbooneysiiyay Isıkgöl Street oo ah halbowle muhiim ah. [More ...]
Martiqaad ka timid Madaxwaynaha Karabacak illaa Dabaysha Mashruuca Darica-Gebze Metro
Şükrü Karabacak, Duqa Magaalada Darıca, wuxuu ku casuumay dhammaan dadka Darıca xafladda furitaanka ee Darica - Gebze Metro Line oo la qaban doono Sabtida, Oktoobar 20. Darica - Gebze Metro Line [More ...]